Caqligu ha xoroobo aqoontu ha ku celiso! WQ/: Najah Yasin Abdi | Laashin iyo Hal-abuur
Caqligu ha xoroobo aqoontu ha ku celiso! WQ/: Najah Yasin Abdi
Caqligu ha xoroobo aqoontu ha ku celiso!
Waxaa mahad ballaadhani u suggnaatay Allihii ina uumay kaasoo ina siiyey nimcooyin gaar ah, oo ay ka midtahay nimcadda diinteena islaamka ah, illaahow amaan oo dhan aday kuu sugnaatay. Allihii ii suurta galiyey inaan qoro qoraalkan kooban. Alxamdulilaah yaa Rabbal-Alcaalamiin.
Intaa dabadeed waxaan qoraalkan u hibeeyey hooyaday macaan Aamina Warsame Mohamud illaahay janNadii fardows ha geeyee, illaahay ha u raxmado, oo haka mid-dhigo kuwa kitaabkooda midigta laga siin doono illaahay hanugu kulmiyo janNadda….. Waxay igu bar-baarisay jawi iyo xayndaab aqooneed, waxay sabab u ahayd waxkasta oo aan ku gaadhay guushayda iyo hormarkayga..
Mararka qaar markii aan dheehdo faallooyin iyo aragtiyo ay bulshadu isku weydaarsato baraha bulshadda, runtii waxay noqdaan kuwo aanan jeclaysan, waxaan arkaa dhallinyaro badan oo kuwada hadlaya ereyo iyo weedho ka turjumaya is nacayb iyo aflagaadooyin aan midba-midka kale u aabba yeelayn.
Sida uu xadiiska hoos ku qorani sheegayo, waxaan Eebbe ka magan galnay cilmi aan lagu dhaqmayn oo aan muujinayn aqoonta iyo akhlaaqiyaadkaad baratay.
Marka hore haddii aan eray bixin iyo macno kooban u sameeyo waxa ay aqoontu tahay. “aqoontu waa ogaalka guud oo uu qofka ka haysto xaalad, islamarkaana uu muujiyo ku dhaqankeeda, taasoo aan sababb uga dhigayo inaanay ahayn aqoontu in shahaado la qaato oo kaliya.
aqoontu waa shay aad u muhiimsan oo uu qofka aqoonta lihi kaga horreeyo kuwa aan aqoonta lahayn, aqoontu waa awood gaar ah oo uu leeyahay shaqsigu, taasaa anfaci karta waqti kasta iyo xaalad kasta.
Aqoontu waa tan dadka kala horumarisa, qaarna dib u dhigta qaarna horay u socodsiisa. Waayo marnaba ma sinaan karaan qof aqoon leh iyo mid aan lahayn. Laakiin ogoow inaanay aqoontu ahayn keliya inaad shahaado qaadato, aqoonta iyo iskaashiga caqliga wanaagansani waxay soo saari karaan wax soo saar maskaxeed iyo mid kaleba iyadoo la rabo inaa mar waliba quluubtaada ku hayso sidii aad wax uga beddeli lahayd aragtidaada shaqsiyadeed.
Tusaale 1: haddii aynu dib u jaleecno Soomsaliya intaynaan xoriyadda yagleelin k ahor, waxaa jiray oo bulshadda hoggaanka u hayey oday-dhaqmeedyo, culumaa’udiin, iyo waxgaradka kale, kuwaaso innagu hagi jiray hadba tigaada iyo wixii horumar u ah geyiga soomaal.
Haddaba su’aashu waxay tahay dadkii hore aqoon ma lahaaayeen?
Taas waxaan ku caddaynayaa, waxaa hubaal ah in awoowayaasheenii hore iyo hooyooyinkeenii hore ay aqoontu u ahayd adkaynta iyo ku dhaqanka dhaqankeena suuban iyo diinteenaba ooyna ku dhabar adaygi jireen sidii ay ugu dabakhi lahaayeen noloshoodii markaa jirtay.
Tusaale 2: agabka loo isticmaalo guryaha sida weelashii dhammaantood ka samaysnaa dhirteena sida: Dhiilaha, haammaha, hadhuubka caanaha lagu cabo IWM. Dhammaantood waxaa hindisay soomaalidii hore, marka ma is odhan kartaa aqoon ayaa ka madhnayd haweenkii hore ee soomaaliyeed?
Aqoonyahanku waa kan/tan ku dhaqma dhammaan dabeecadaha aqoontu leedahay iyo akhlaaqiyaadkeedaba. Waana sidan hoos ku qoran.
Markii aan leeyahay aqoontu ha badasho shaqsiyadaada, ulajeedkaygu maaha inaan leeyahay muqaalkaaga qofeed iyo kan qaab ahaaneed aad isu badashid, sida inaad koodh iyo tie xidhato, ookiyaalo etc. laakiin arrinku sidaa ka weyn.
Siyaasaddaha qalafsan yaanay ku jiidan